पूर्व माओवादीहरु एमालेमा हावी हुँदा १० बुदे तेस्रो धार नेताहरुको हरिविजोग ! – GALAXY
पूर्व माओवादीहरु एमालेमा हावी हुँदा १० बुदे तेस्रो धार नेताहरुको हरिविजोग !
काठमाडौँ ।एमालेमा माओवादीबाट आएका बादल र लेखराजहरु हावी हुँदा माधवकुमार नेपाललाई अन्तिम समयमा आएर धोका दिएका एमालेका १० भाइको बिजोग भएको छ ।
केपी ओलीको गुलियोमा भुलिएका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहोरा अहिले आफैं रणभुल्लमा परेका छन् ।ओलीले कुनै भूमिका नदिए पनि १० बुँदेको रटान लगाएर १० भाइ एमालेमै बस्न विवश छन् ।
एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुँदैछ । विधान महाधिवेशन मूल आयोजक समितिको संयोजक पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादललाई बनाइएको छ ।
महाधिवेशनको कुनै पनि समितिमा १० भाइलाई राखिएको छैन । योगेश भट्टराई सचिवमै रमाएका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख र पार्टीको प्रवक्ता दिइने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म केही दिइएको छैन ।अब योगेशहरूको काम भनेको बादल समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने मात्रै देखिएको छ ।
सबैभन्दा समस्यामा भीम रावल पर्ने निश्चित भएको छ । किनकि ओलीले बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपाध्यक्षको वरीयतामा राखेर बादललाई इन्चार्ज कायम राखेका छन् । यही नजिर अव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि लागू हुने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रावल र पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट दुवैले आफू प्रदेश इन्चार्ज भएको दाबी गरेका छन् । तर, ओलीले रावललाई पनि पार्टीको उपाध्यक्षको वरीयतामा सीमित गरेर भट्टलाई नै इन्चार्ज तोक्दै छन् ।
यदि भट्ट सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनेवित्तिकै रावलको पकड प्रदेशमा खुस्किने निश्चित छ ।यस्तै, हरिबिजोग सुरेन्द्र पाण्डेको पनि भएको छ । पाण्डेले कुनै पनि भूमिका पाएका छैनन् । अहिले उनको काम भनेको माधव नेपालले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्दै भाषण गर्दैमा बित्ने गरेको छ ।बादल प्रदेश इन्चार्ज हुनेवित्तिकै पाृण्डेको चितवनमा अहिलेसम्म देखिएको पकड पनि गुम्दै जाने खतरा छ ।